Mabasa Evaapostora 25:1-27
Pauro anotaura nyaya yake pamberi paFesto (1-12)
“Ndinokwidza nyaya yangu kuna Kesari!” (11)
Festo anotsvaga mazano kuna Mambo Agripa (13-22)
Pauro pamberi paAgripa (23-27)
25 Saka Festo+ paakasvika mudunhu racho, akakwidza kuJerusarema achibva kuKesariya pashure pemazuva matatu atanga kutonga. 2 Uye vatungamiriri vevapristi nevarume vakuru vevaJudha vakamuudza zvavaipomera Pauro.+ Saka vakatanga kukumbira Festo 3 kuti avabatsire nekuita kuti Pauro aunzwe kuJerusarema. Asi vakanga vachironga kuhwandira Pauro munzira, vomuuraya.+ 4 Asi Festo akapindura kuti Pauro aifanira kuchengetwa muKesariya uye kuti iye wacho akanga ava kuda kutodzokerako. 5 Akati, “Saka vatungamiriri venyu ngavauye tiende tese vanomupomera kana paine chaakatadza zvechokwadi.”+ 6 Saka paakanga apedza mazuva angasvika 8 kana kuti 10 ainavo, akadzika kuKesariya, uye mangwana acho akagara pachigaro chekutonga, akarayira kuti Pauro aunzwe. 7 Paakapinda, vaJudha vakanga vabva kuJerusarema vakamukomba, vachimupomera mhosva dzakakura dzakawanda asi vachitadza kupa uchapupu hwekuti ndedzechokwadi.+ 8 Asi Pauro akapindura kuti: “Handina kutyora Mutemo wevaJudha kana kutadzira temberi kana Kesari.”+ 9 Festo, achida kunzi akanaka nevaJudha,+ akapindura Pauro achiti: “Unoda here kukwidza kuJerusarema wonotongerwa nyaya idzi pamberi pangu?” 10 Asi Pauro akati: “Ndakamira pamberi pechigaro chekutonga chaKesari, pandinofanira kutongwa. Handina zvandakatadzira vaJudha sezvamava kuzvionerawo. 11 Kana ndiine mhosva yandakapara uye ndakaita chimwe chinhu chakakodzera rufu,+ handisi kukumbira kuti ndirege kufa; asi kana nyaya dzandiri kupomerwa nevanhu ava dzisina chokwadi, hapana munhu ane kodzero yekundiisa mumaoko avo kuti avafadze. Ndinokwidza nyaya yangu kuna Kesari!”+ 12 Festo akabva ataura nedare remakurukota, ndokupindura kuti: “Wakwidza nyaya yako kuna Kesari, saka uchaenda kuna Kesari.” 13 Pashure pemazuva, Mambo Agripa naBhenisi vakasvika muKesariya vachishanyira Festo kuzomukwazisa. 14 Sezvo vaizomboti garei ikoko kwemazuva, Festo akabva asuma mambo nyaya yaPauro achiti: “Pane mumwe murume akasiyiwa ari musungwa naFerikisi, 15 uye pandaiva kuJerusarema vatungamiriri vevapristi nevakuru vevaJudha vakauya kuzondiudza nezvake,+ vachikumbira kuti arangwe. 16 Asi ndakavapindura kuti hausiri iwo mutemo weRoma kuti vanhu vapiwe munhu wavari kupomera mhosva kuti vafare, iye munhu wacho asati aonana chiso nechiso nevari kumupomera vacho, kuti apiwe mukana wekuratidza kuti zvavari kumupomera hazvisi zvechokwadi.+ 17 Saka pavakasvika pano, handina kunonoka, asi mangwana acho ndakagara pachigaro chekutonga, ndikati murume wacho aunzwe. 18 Pavakasimuka vachitaura, vanhu vacho havana kumupomera mhosva dzakaipa dzandaifunga kuti ndidzo dzaakaita.+ 19 Vaingoitisana nharo nezvekunamata kwavo mumwe mwari*+ uye pamusoro pemurume ainzi Jesu, akanga afa asi uyo Pauro akaramba achiti mupenyu.+ 20 Pandakashaya kuti ndogadzirisa sei nharo idzi, ndakamubvunza kana aida kuenda kuJerusarema kunotongwa ikoko pamusoro penyaya idzi.+ 21 Asi Pauro paakakumbira kuti achengetwe muusungwa kuti nyaya yake izotongwa naMambo Mukuru,+ ndakataura kuti arambe akachengetwa kusvikira ndamutumira kuna Kesari.” 22 Agripa akabva ati kuna Festo: “Ndinoda kumunzwawo ndega murume wacho.”+ Akati, “Uchamunzwa mangwana.” 23 Saka mangwana acho Agripa naBhenisi vakapinda muimba yaitongerwa mhosva vachizvikudza vaine vatungamiriri veuto nevarume vakakurumbira vemuguta; uye Festo akarayira kuti Pauro aunzwe, ndokubva apindwa naye. 24 Festo akati: “Mambo Agripa nemi mese muri pamwe nesu, murume wamuri kuona uyu ndiye wandakakumbirwa nezvake nevaJudha vese vekuJerusarema nevekuno, vachishevedzera kuti haafaniri kuramba ari mupenyu.+ 25 Asi ndakaona kuti hapana chaakaita chingaita kuti akodzere kuurayiwa.+ Saka murume uyu paakakwidza nyaya yake kuna Mambo Mukuru, ndakasarudza kumutumira. 26 Asi ndashaya chinhu chine musoro chekunyora nezvake kunaShe wangu. Saka ndamuunza pamberi penyu mese, kunyanya imi Mambo Agripa, kuti kana dare raongorora, zvimwe ndingawana chekunyora. 27 Nekuti ndiri kuona zvisina musoro kuti nditumire musungwa asi ndisingatauri mhosva dzaari kupomerwa.”
^ Kana kuti “nezvechitendero chavo.”